My freedom: June 2012
သင်္ဘောပေါ်တက်တက်ချင်းပဲ အိတ်ထဲထည့်လာတဲ့ Sun screen ဗူးကြီးက အဖုံးပွင့်ပြီးဖိတ်လို့ တော်တော်လုပ်ယူလိုက်ရတယ်။ အိတ်ထဲဖိတ်တဲ့ Sun screen တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း လူးရင်း သူငယ်ချင်းတွေကို အတင်းလိုက်လူးပေးရတယ် xD ရောက်သွားပြီ...
စိမ်းစိုနေတာပဲ.. အရမ်းမိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်းထိုင်ဖို့ အခင်းတွေ မေ့ကျန်ခဲ့လို့ ထိုင်ခုံရှိတဲ့နေရာပဲ ရှာရတယ် >.<
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ် :P :P Good Night.
ခေါင်းစဉ်ကြည့်တာနဲ့တင် မိန်းကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်မှန်း သိပါတယ်နော်။ တကယ်တော့ ဒီအကြွေးက တင်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ။ မမီးမီးက မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း ရေးပေးပါလို့ ပြောထားတာ ခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ ဒီပိုစ့်က "မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း"ဆိုတာထက် "ကန်ဒီ့မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း"ဆို ပိုမှန်မယ်။ မိန်းကလေးတယောက်နဲ့တယောက် လိမ်းနည်းတွေက ကွဲပြားကြမှာပဲလေ။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တယောက်လည်း မဟုတ်တော့ ဒီနည်းက အမှန်ပါလို့ မပြောချင်ဘူး။ ကန်ဒီသုံးတဲ့ Cosmetic တချို့ကိုလည်း အကြမ်းဖျင်း ပြောပြသွားမယ်နော်။ ဈေးကြီးတဲ့ Cosmetic တွေတော့ မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့။ ပိုက်ဆံမရှိသော ကန်ဒီသည် Chanel တို့ Dior တို့ သုံးနိုင်စွမ်း မရှိပါ >.< မျက်နှာသစ် Moisturizer လိမ်းပြီးရင် Sunscreen လိမ်းပါတယ်။ ကန်ဒီသုံးတာ Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch SunBlock (SPF 30) ပါ။ သူက တခြား Sunscreen တွေလို မျက်နှာကို အဆီမပြန်စေဘူး။ အဲ့ဒါပြီးရင် Nivea Lip Balm ကို နှုတ်ခမ်းမှာ လိမ်းထားပါတယ်။ အားလုံးပြီးရင် ဆိုးမယ့်နှုတ်ခမ်းနီအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပေါ့။
(2) Blush Brush (3) Blending Brush
(4) Eyeshadow Brush (5) Eyeshadow Brush (6) Eyeliner Brush (မျက်ခုံးမွှေးဆွဲဖို့)
Facebook Notification တစ်ခုတက်လာလို့ ဖတ်လိုက်တော့ OMG!! ထင်မှတ်မထားတဲ့သတင်းတစ်ခု။ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေး။ ဒီလောက်မြန်မြန်လက်ထပ်ဖြစ်မယ် မထင်ထားတော့ အံ့သြသွားတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်လည်း အရမ်းပျော်မိတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ပုံတောင် ကန်ဒီ့ဘလော့မှာ တခါတင်ဖူးသေးတယ်။ သူတို့ခွင့်ပြုလို့လေ။ ကန်ဒီမမှားဘူးဆို သူတို့စတွေ့တာ မနှစ်က ကန်ဒီ့မွေးနေ့မှာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်မှာဆူရှီလုပ်ကျွေးတော့ တဖက်စီက သူငယ်ချင်းတွေဆုံကြတယ်လေ။ ကိုပြည့်ဖြိုးက ကန်ဒီ့ထက်ကြီးပြီး မေချိုက တနှစ်ငယ်တယ်။ အဲ့လို သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်တာမျိုး တခါမှမကြုံဖူးသေးတော့ ပျော်လည်းပျော် တဆက်တည်း တွေးမိတာက ကန်ဒီ့အရွယ်က "မင်္ဂလာဆောင်ရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီလား.." ဆိုပြီး (:P :P)။ အစ်မတယောက်က "ကန်ဒီ့အလှည့် ဘယ်တော့လဲ.."တဲ့ (ဟီးဟီး)။ Noooo ပါ.. ကန်ဒီက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးတယ် :D
အဲ့နေ့ကပုံတွေ ဖေ့ဘွတ်မှာတင်တော့ အမေက ကန်ဒီတို့ပုံတွေမြင်ပြီး ကန်ဒီ့ကို ၀ လာတယ်တဲ့။ အမှန်က ဒီရက်ပိုင်း နေမကောင်း ၀မ်းလျှောနဲ့ ပိန်သွားတာ ဟိ
သတို့သမီးက သူကိုင်တဲ့ပန်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပေးထားတာ :P
ဒါ သူတို့ပေးတာ။ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ? မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ လာတဲ့သူအားလုံးကို ပေးတဲ့ဟာလေ..
နေရာက East Coast Goldkish Restaurant.. အဲ့မီးခွက်လေးတွေ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေက မေချိုကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတာတွေ။ Restaurant က လုပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘူး။ အရမ်းသဘောကျတယ်။ မေချို့တူလေး.. တနှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာ ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ ၀ါးသွားတယ်။ ကန်ဒီ ကလေးချစ်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးချစ်အောင် မပြောတတ်ဘူး။ ဘယ်လိုပြောမလဲ... ကလေးသဘောကျအောင် မလုပ်ပြတတ်ဘူး။ တကယ်တော့ လူကြီးချစ်အောင်လည်း မပြော/မလုပ်တတ်ပါဘူး(>.<)။ ကန်ဒီ့မှာ ခုထိ တူတွေ တူမတွေ မရှိသေးဘူး။ အရမ်းလိုချင်တယ်။ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အစ်ကိုတယောက်ကလည်း ခုထိ ကလေးမရသေးဘူး >.<
သူ့ကိုတော့ တွေ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကန်ဒီ့ဘလော့မှာရော ဗွီဒီယိုတချို့မှာပါ ပါဖူးတယ်။ ဟင်းချက်ကောင်း ဂစ်တာတီးကောင်းပြီး အရမ်းခင်ရတဲ့ အစ်ကိုတယောက်ပါ။ သူ့မကောင်းကြောင်းတော့ ဒီမှာရေးလို့မဖြစ်ဘူး။ သူက ခုတောင် ဖတ်ရင် ဖတ်နေမှာ.. ဟဟဟ (နောက်တာနော် :P)
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီး နာရီဆင်တူလေး ပေးလိုက်တယ် (ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူး)။ သူတို့အတွက် ကန်ဒီသီးသန့်လုပ်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကတော့ ဒါလေးပါ...
အံ့သြသွားအောင် ဟိုနေ့ကပဲ သူတို့ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ပေးလိုက်တယ်။ ကန်ဒီ့ Channel မှာတင်ဖို့ မေချို့ကို ခွင့်တောင်းတော့ သူကခွင့်ပြုတယ်လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ YouTube မှာလည်း တင်ဖြစ်သွားတယ် :D
ကန်ဒီ့လက်ဆောင်လေး သူတို့နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်^^
ဒီပိုစ့်လေးက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပျော်တွေ မျှဝေတာဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့ :D Good Night.. Reactions: Posted by
တခြား Tea အမျိုးအစားတွေနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆို Green Tea က Antioxidant (Polyphenol) ပါဝင်မှုအများဆုံးလေ။ အကြောင်းကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို သူက ခူးခူးပြီးချင်း အာနိသင်တော်တော်များများ မဆုံးရှုံးခင် Preserve လုပ်ထားတဲ့အရွက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်လို့ပါ။ အကျိုးအာနိသင်များ ► Green Tea မှာ Antioxidant Polyphenol ပါဝင်လို့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို နှေးကွေးစေတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အရွယ်တင်နုပျိုစေတယ်ပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံနိုင်မှုစွမ်းအားကိုလည်း မြင့်မားစေပါတယ်။ ► တနေ့ကို Green Tea ခွက်တ၀က်ပဲ သောက်တဲ့လူတွေမှာတောင် သွေးတိုးတဲ့လက္ခဏာတွေ လျော့နည်းစေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သွေးကြောတွေကို ကျဉ်းစေပြီး သွေးတိုးခြင်းကို အားပေးတဲ့ Angiotensin Converting Enzyme (ACE) ကို တားဆီးပေးလို့ပါ။ အခုဈေးကွက်မှာ အသုံးများနေတဲ့ သွေးတိုးချဆေးတွေကလည်း ACEကို တားပေးတဲ့ဆေးတွေပါပဲ။ ACE Inhibitors လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်လေးရေးပေးဖို့ပြောထားတဲ့ အစ်မ/ညီမလည်း ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ကြာသွားလို့ မေ့တောင်သွားပြီလား :P :P OK ကန်ဒီလည်း ရေနွေးတခွက်လောက်သွားယူလိုက်ဦးမယ်^^
ဟိုနေ့က တရားပွဲ လူအရမ်းစည်တယ်။ အဲ့လောက်လူများမယ် မထင်ထားဘူး။ ကန်ဒီက ကြိုဆိုရေးဆိုတော့ လာတဲ့သူတွေကို "မင်္ဂလာပါရှင့်.. အပေါ်ကြွပါရှင့်" အဲ့လိုပြုံးပြီးပြောရတာ(^_^)။ ကိုယ်တိုင်မရိုက်ဖြစ်တော့ ဖေ့ဘွတ်ကပုံလေးတွေ နည်းနည်းမလာတယ် :P ဆရာတော်သုံးတဲ့မိုက်က စံပယ်ပန်းလေးတွေက ကန်ဒီတို့ ဒီလိုသီထားတာလေ :D (ကန်ဒီ့ကိုတွေ့လား??)
သူငယ်ချင်းတယောက်က မေးတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာပုံလဲတဲ့?? ကန်ဒီ မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။ အားလုံးကို ပြန်မေးမယ်နော်။ အဲ့ဒါ ဘာပုံလဲ??? ဒီပုံလေးကို အရမ်းသဘောကျလို့ အဲ့သူငယ်ချင်းဆီက ယူလာတာ။ ကန်ဒီ တက်တူးထိုးတာ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒီပုံကို ကြိုက်တဲ့အကြောင်းက ထိုးပေးတဲ့သူရဲ့အနုပညာကို လေးစားလို့ဆို ပိုမှန်မယ်။ ကန်ဒီ အရှုံးပေးတယ်ဆိုလို့ သူအဖြေပြောတာတောင် ကန်ဒီချက်ချင်းမြင်အောင် မကြည့်နိုင်ဘူး (အဲ့လောက်တော်တာ)။ အဖြေက... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတဲ့။ မြင်လား?? အနီရောင်ဘက်က မျက်နှာ။ ဘယ်ဖက်ခြမ်းက အလင်းထိုးနေတဲ့ပုံမျိုး ဆွဲထားတာ။ ညာဖက်က အစိမ်းရင့်ရောင်နောက်ခံပေါ်မှာ ခိုလေးတွေ ပျံနေတယ်။ ကန်ဒီ နိုင်ငံရေးတွေ မသိသလို စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး။ ဒါကိုထိုးတဲ့သူရဲ့ပန်းချီပညာနဲ့ စိတ်ကူးကိုပဲ အရမ်း အရမ်းသဘောကျတယ်။
ပြီးသွားတာ တလလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မွေးနေ့အတွက် ခုမှရတဲ့ တခုတည်းသော မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို ပြမလို့ :D လက်ဆောင်ပေးတဲ့ကန်ဒီ့ညီမကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပေါ့။ ခုဖတ်နေတယ်ဆိုရင် THANK YOU!!!
မှတ်မိလားတော့ မသိဘူး။ ကန်ဒီမျက်ကပ်မှန်အကြောင်း ပိုစ့်တပုဒ်ရေးဖူးတယ်။ ကန်ဒီ့မှာ Cylinder (ခေါ်) Astigmatism ရှိလို့ Color contact lens တပ်လို့မရဘူးလို့ရေးထားတယ်။ ခု Astigmatism ရှိတဲ့လူတွေအတွက် Color contact lens တွေ ပေါ်နေပြီ။ အဲ့ဒါမျိုးကို Toric Lens လို့ ခေါ်တယ်။ ရှားတာတော့ အရမ်းအရမ်းရှားတယ်။ ဈေးလည်း တော်တော်ကြီးတယ်။ တပ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် ပိုက်ပိုက်($$)မရှိလို့ မ၀ယ်နိုင်တဲ့အပြင် ဈေးကမတန်တဆကြီးတယ်ထင်လို့ မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး >.<
ခုဆို လက်ဆောင်ကို မှန်းလို့ရနေပါပြီ။ ဟုတ်တယ်... ကန်ဒီ့ညီမပေးတဲ့လက်ဆောင်က Prescription Color Contact Lens (:D) Circle lens ဆို ပိုမှန်မယ် ထင်တယ်။ သူက မျက်ဆံကို နည်းနည်းပိုကြီးသွားစေတယ်။ အဲ့တခုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အရောင်(Choco Brown)တော့ ကြိုက်တယ် :D
၀တ်ရတာ ကန်ဒီ့အရောင်မပါတဲ့ ရိုးရိုး Lens တွေထက်တောင် ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ ဘာကွာလို့လဲတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တခါတလေပဲ ၀တ်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ သိပ်သဘာဝမကျလို့... အထူးအရေးပေါ် သတင်း လက်ဆောင်အကြောင်းကို ဒီမှာတင်ရပ်ပြီး အဲ့ထက်အရေးကြီးတာ ပြောပြစရာရှိတယ်။ မနက်ဖြန် ဇွန်လ၁၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)မှာ ကန်ဒီတို့ Volunteerအဖွဲ့(မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း)က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ မေတ္တာရှင်ဆရာတော်ရဲ့တရားပွဲရှိတယ်။ ကန်ဒီလည်း ဒီရက်ပိုင်း အဲ့ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ အစ်ကို အစ်မတွေဆီ ဘလော့လည်ပြီး စာတောင်မဖတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရှုပ်ဆို ဆရာတော်ကြွလာမယ့်အကြောင်း သတင်းတွေ၊ မနက်ဖြန်တရားပွဲဖိတ်တဲ့ပိုစ့်တွေနဲ့ အလှူမှတ်တမ်းတချို့ကို အဲ့ဒီဘလော့မှာ ကန်ဒီဒိုင်ခံတင်နေတာလေ။ တရားပွဲမှာဝေမယ့်စာရွက် ခေါက်တာတွေနဲ့ အခမ်းအနားပြင်ဆင်တာတွေ ဒီနေ့ညသွားလုပ်ရမယ်။ မနက်ဖြန်လည်း ကြိုဆိုရေးမှာ ကူရမယ်။ အဲ့ဒါတွေကြောင့် တရားပွဲသတင်းကို ကန်ဒီ့ဘလော့မှာ ခုမှပဲတင်နိုင်တော့တယ်။ ဒီနေ့စနေဆိုတော့ တော်တော်တောင် နောက်ကျနေပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မတင်ဖြစ်လိုက်တာထက်စာရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
တရားပွဲအစီအစဉ် နေ့ရက် - ၁၀.၆.၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် - ညနေ (၆)နာရီမှ ည (၉)နာရီ အထိ
နေရာ - Function Room 1 , The Arena Country Club, 511 Upper Jurong Road, Singapore 638366 မနက်ဖြန် အားရင် တရားနာလာခဲ့ဖို့ ကန်ဒီ ဖိတ်ပါတယ်နော်...
လူတိုင်းမှာ ချို့ယွင်းချက်ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်သူကများ အစစအရာရာ ပြီးပြည့်စုံနေလို့လဲ??? အဲ့လောက် ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို မသိကြလို့လား?? အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြသူချင်းအတူတူ ဘာလို့ သူများအားနည်းချက်ကို ရှုံ့ချချင်နေကြတာလဲ?? Physically ချို့ယွင်းမှုတွေပဲ ပြောရအောင်နော်..... ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့။ ဥပမာ အသံမကောင်းတဲ့ လူတယောက်ကို တည့်တည့်ကြီး "၀ါးဟားဟား.. မင်းအသံကြီးက နားဝင်ဆိုးလိုက်တာကွာ..."လို့ ပြောသင့်လား?? နဖူးပြောင်တဲ့ လူတယောက်ကို "မင်းနဖူးကြီးက ပြောင်လိုက်တာကွာ.."လို့ ပြောရင် အပြောခံရတဲ့လူက ကြိုက်မယ်ထင်လား? ဒါတွေက လူရွှင်တော်တွေပဲ ရီရအောင် ပြက်တာပါ.. တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဘယ်သူမှ အဲ့လိုမပြောပါဘူးလို့ ထင်နေလား?? တချို့ တချို့သော လူတွေက အပြောအဆိုမတတ်ဘူးပဲ ပြောရမလား.. လူတဖက်သားကို နှိမ့်ချချင်တယ်ပဲ ဆိုရမလား.. နားမလည်နိုင်လောက်အောင် တဖက်လူကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ သူတို့ဘာရလဲတော့ ကန်ဒီလည်း မဝေခွဲတတ်ဘူး။
တချို့ပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေက အမှန်ကိုမြင်အောင် ပြောပြသင့်ပေမယ့် ပြင်လို့မရတဲ့ မွေးရာပါ Physically ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို မလှောင်ပြောင်သင့်ဘူး။ အဲ့လိုလှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့အတွက် အပြောခံရတဲ့လူမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေ အားနည်းလာတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကို စမယ်ဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီချို့ယွင်းချက်ကို ဖိပြီးမစသင့်ဘူး။ ကလေးတယောက်စိတ်ထဲမှာ အားငယ်စိတ်ဝင်သွားပြီဆိုရင် အဲ့ဒီစိတ်က ကြီးတဲ့အထိ အသေဖြစ်သွားတတ်တယ်။
လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကို ချီးမွမ်းဖို့ အဲ့လောက်မခက်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုးကွက်တွေပဲ လှောင်ပြောင်ချင်နေတာလဲ?? ဒါလူ့သဘာဝလို့ပဲ ပြောရမလား? မလှတာကို လှတယ်လို့ပြောခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ မလှတာကို မလှဘူးလို့ မပြောလည်း ဖြစ်တာပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်... သူများအတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ရော အကျိုးမရှိတဲ့စကားကို ဘာလို့ပြောမှာလဲ...
ဒီပိုစ့်က မတော်တဆစိတ်ကူးရလို့ ရေးတဲ့ပိုစ့်တပုဒ်တော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီရက်ပိုင်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေ တွေ့နေရလို့ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမရေးဘဲ စိတ်ပြေတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီး အချိုသာဆုံး ပေါက်ကွဲထားတာ.. ♫♪ You made me insecure... Told me I wasn't good enough
But who are you to judge.. When you'readiamond in the rough
I'm sure you got some things.. You'd like to change about yourself
But when it comes to me.. I wouldn't want to be anybody else ♫♪
အဆုံးစွန်ထိတွေးရမယ်ဆို အားလုံးက ဗိုက်ဆာရင် တခုခုစားရပြီး တနေ့တခါ အိမ်သာတက်ရတဲ့လူတွေချည်းပဲ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ် =.="
Ekk.... ဥပမာ နည်းနည်း ပြင်းထန်သွားတယ်(:P)။ ပြင်ဆင်ချက် >>> အနည်းဆုံးတော့ ၀မ်းနည်းရင် ငိုတတ်တဲ့လူတွေချည်းပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ^_^ Reactions: Posted by
အလှူတခုပြုတော့မယ်ဆို အရေးကြီးဆုံးက သဒ္ဓါစိတ်လို့ ကန်ဒီထင်တယ်။ နည်းတာ များတာထက် လှူချင်တယ် ပေးကမ်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးကပဲ ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတာလေ။ ဒါဆို လှူပြီး ကုသိုလ်မရဘဲ အကုသိုလ်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုး ကြုံဖူးလား?? တခြားလူတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး။ စိတ်တိုလွယ်သော.. မရင့်ကျက်သော.. နားလည်နိုင်မှု အားနည်းသော.. ကန်ဒီသည် လှူပြီး အကုသိုလ်များ ရလေသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးမှာတင် အဲ့လိုအဖြစ်မျိုး နှစ်ခါတိတိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမအဖြစ်က လှူတာနဲ့ မပက်သက်ပေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ အဲ့တခေါက်က ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရေတံခွန်ကို တက်ညီလက်ညီ ချီတက်ကြပါတယ်။ ရေတံခွန်သွားတဲ့ လမ်းအစမှာပဲ မဏ္ဍပ်တခုရောက်တော့ အဲ့က အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်က နားပြီး ဘုရားဖူးပါဦး လှူပါဦး ဘာညာပြောတော့.. ကန်ဒီတို့က အပြန်ကျရင် ဖူးပါမယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ် (ဟုတ်တယ်လေ.. အားလုံးကလူငယ်တွေဆိုတော့ အဲ့အချိန်မှာ ရေတံခွန်ဆီပဲ စိတ်ရောက်နေကြတာ)။ အဲ့မှာတင် စပေါက်ကွဲတော့တာပဲ.. ဘုရားမဖူးရကောင်းလား ဆိုပြီး ထ ဆဲ ပါလေရော.. (>.<)။ လူတောင် ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အလှူခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ထ ဆဲတယ်ဆိုတော့.. ကြောက်လည်းကြောက်.. စိတ်လည်းတို.. ကိုယ့်နားတောင် ကိုယ်မယုံနိုင်အောင်ပဲ =.=" ဒုတိယတခေါက်က ကန်ဒီတို့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကနေ ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားသွားကြတယ်။ လမ်းမှာ ထုံးစံအတိုင်း အလှူခံမဏ္ဍပ်တွေ ရှိတာပေါ့။ တနေရာရောက်တော့ ကန်ဒီတို့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ အဲ့က ဦးလေးကြီးတယောက်က ကန်ဒီ့ကို ရေပုံးလှမ်းပေးပြီး ဘုရားနားခေါ်သွားတယ်။ ကန်ဒီလည်း ကြောင်တောင်တောင်လေးပါသွားတာပေါ့။ ဟိုရောက်တော့ "ရေသပ္ပာယ်လေ သမီးလေး.." ဆိုတာနဲ့ ရေသပ္ပာယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခွာပေးပြီးသား ရွှေသင်္ကန်းစက္ကူလေးကို လှမ်းပေးပြီး "ကပ်လိုက်.. ကပ်လိုက် သမီး.." ပြောတော့ သူပြောသလို ကပ်လိုက်တာပေါ့။ အားလုံးလည်း ပြီးရော.. အလှူငွေဖြတ်ပိုင်းကို လှမ်းပေးတယ်။ သူတို့ပုံစံတွေက "အဲ့ဒါတွေလုပ်တာ ဒီလောက်ကျတယ်.. ပေးးးး" ဆိုတဲ့ အထာမျိုး။ What?!?!?!?!?! ... စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဒေါသတွေ ထွက်သွားမှန်းမသိဘူး။ ဒါ အလှူခံနေတာလား.. ဓားပြတိုက်နေတာလား..။ သူတို့ဖြတ်ပိုင်းမှာပြတဲ့ ပိုက်ဆံပေးပြီး တန်းပြန်တာ။ ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားလည်း ဆက်မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ စိတ်ထဲမှာ အဲ့လိုခုသွားရင် ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘူး။ ကန်ဒီလှူချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုပုံစံ လာလုပ်တာမျိုးကို ဘယ်လိုမှခံစားလို့မရဘူး။ နောက်ပြီး အဲ့တုန်းက ကန်ဒီ့မှာ ပိုက်ဆံမလုံလောက်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတာလေ။ ပြောရမယ်ဆို သုံးစရိတ်အားလုံးနဲ့ လှူဖို့ကို ကွက်တိတွက်ထားပြီးသား။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ စိတ်ကပိုတိုသွားတယ်။ အကုသိုလ်တွေ ရတယ် >.<